Iska Ilow Wacdarihii MESSI, Barcelona Oo Mar Kale Xasuuqday Real Madrid - Cadalool.com
Iska Ilow Wacdarihii MESSI, Barcelona Oo Mar Kale Xasuuqday Real Madrid
Markii hore kubadda cagta, haddana Kubadda Kolayga, waa ereyada ay jamaahiirta Barcelona farxadda iskula wadaagayaan, laakiin kuwa Real Madrid ayaa afkoodu juuqda gabay oo aan haysanin xattaa wax ay kula doodaan reer Barcelona.
Kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa dhirbaaxooyin is-xigxigay kala kulantay Barcelona, laakiin hadda kubaddii kolayga ayaa laysugu soo galay, waxaana toddobaadkan ka dhacday ciyaar khasaare weyn kasoo gaadhay Real Madrid oo Barcelona ay ku dubatay.
Kooxda kubadda kolayga Barcelona ayaa si buuxda u sheegatay inay ka awood badan tahay Real Madrid, waxaanay dhawaan kaga guuleysatay Koobka Copa del Rey oo qaab muran ku jiro ay guushu ugu raacday 94-93, hase yeeshee Axaddii ayay mar kale ayay ku kulmeen garoonka Wizink Center ciyaar ka tirsan horyaalka kubadda kolayga dalka Spain ee loo yaqaano Liga Endesa.
Ciyaartan oo ka dhacday garoonka Wizink Center, ayaa waxay guushu raacday Barcelona oo ku adkaatay 82 halka Real Madrid ay la timid 76 dhibcood.
Guushan ayaan ayaa Barcelona u ahayd middii 10aad ee ay gaadhaan 12 ciyaarood oo ay yeesheen, waxaana sidoo kale ay u ahayd tii labaad ee xidhiidh ah ee garoonka WiZink Center.
Kooxda uu tababaraha ka yahay Svetislav Peric ayaa waxay hoggaaminaysaa horyaalka, waxaanay ciyaaraheedii ay dheeshay ay ku muujisay inay ka awood badan tahay dhamaan kooxaha kale, iyadoo isbeddel weyn ka samaysay difaaca, weerarka iyo dhalinta toogashada fogba.
Thomas Heurtel ayaa kalidii Barcelona u dhaliyey 15 dhibcood oo uu ku hubsaday shabaqa Real Madrid, waxaase tiro intaa le’eg Los Blancos u dhaliyey Jaycee Carroll.